★မြန်မာ့အလင်း★: သွေးကပေးတဲ့ တာဝန်
ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သခင်မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကို ကြည့်ကောင်းလို့ အခုဓါတ်ပုံကိုတင်လိုက်တာပါ။ (မြန်မာဆိုသည်မှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ဗမာ အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါသည်) သူတို့တွေကို ကြည့်ရင်း မောင်နှမအရင်းတွေလိုပဲ ခံစားမိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ မျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်ရင်း ကျုပ်တို့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ အနေနဲ့ တာဝန်တွေ ရှိနေတာလဲ သတိထားမိလာတယ်။ သူတို့လေးတွေကို လူအရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ လက်ထဲ ရောက်မသွားအောင် ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ မိန်းခလေးတွေ ဖြစ်မသွားအောင် တတ်စွမ်းသလောက် ကူညီရပါမယ်။ ထို့အတူပဲ လူရမ်းကား မွတ်ဆလင်ဝါဒီများမှ ဖျားယောင်းလှည့်စားပြီး မယားငယ်လုပ်နေတာတွေနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ပြီး အတင်းအဓမ္မ မယားလုပ်ပြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကာကွယ်ရပါမယ်။ ကုလားမယားဖြစ်ရင် တိရိစ္ဆာန်မျိုးပွားရုံ အဆင့်အထိကို နိမ့်ကျသွားမှာပါ။(ဆောင်းပါး) အားနွဲ့ပြီး ဖြူစင်တဲ့ ဒို့အမျိုးတွေကို ကာကွယ်ရမှာ.. ဒို့လူငယ်တွေရဲ့တာဝန်ပဲ။ သခင်မြန်မာလူမျိုးတိုင်း လုပ်ရမယ့် အလုပ်သာဖြစ်တယ်။
စဉ်းစားကြည့်နော် . . ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်တပ်ဆိုတာ သူတို့ကို ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်တွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကို အသရေဖျက်တဲ့ စကားတွေပြောလာရင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့ နအဖ သတင်းစာ၊ နအဖတီဗီ၊ နအဖ ရေဒီယို၊ နအဖ ကျောထောက်နောက်ခံ အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ လူငယ်တချို့ဟာ ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်တပ်ကို ထိလာရင် ရတဲ့နည်းနဲ့ တုံ့ပြန်လိုပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်တပ်အပေါ် မတရားပြောဆိုနေတယ်လို့ ယူဆပြီး တာဝန်သိစွာ တုံ့ပြန်တာကို နားလည်ပါတယ်။ မဟုတ်မခံ စိတ်ထားကိုလဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ဘ၀ဖျက်စီးခံနေရတဲ့ သတင်းကြားတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလူတွေဟာ အသံတိတ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ . . .အင်အားရှိတဲ့ ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်တပ်ကို ကာကွယ်လိုတဲ့သူတွေဟာ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ဥပက္ခာပြု နိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ကန်သလားဗျာ?
စဉ်းစားကြည့်နော် . . . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမိုသမားတွေဟာ သူတို့မှာ အင်အားတွေရှိကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လက်နက်ဆိုလို့ အပ်တစ်ချောင်းတောင် မရှိဘူးဆိုတာ စကားအဖြစ်ပြောနေတာပါ။ သူမကို နအဖ ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒီမိုသမားတွေဟာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိသလိုပဲ အနောက်ဖက်အစိုးရတွေ ၊ NGO တွေနဲ့ ဒီမိုမီဒီယာတွေအများကြီးက ကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမိုသမားတွေကို ထိလာရင် ပွက်လောရိုက်ကုန်တာ အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမိုသမားတွေအပေါ်မှာ မတရားလုပ်လို့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို နားလည်ပါတယ်။ မဟုတ်မခံချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့ ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ဘ၀ဖျက်စီးခံနေရတဲ့ သတင်းကြားတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလူတွေဟာ အသံတိတ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ . . .အင်အားရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမိုသမားတွေကို ကာကွယ်လိုတဲ့သူတွေဟာ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ဥပက္ခာပြု နိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ကန်သလားဗျာ?
ကျုပ်တို့ပြောတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ခေါင်းဆောင်မိုလို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတာ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာတွေရဲ့ အစဉ်အလာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဦးသန်းရွှေကို ဆဲတာ လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ တရားစွဲရုံးတင်ဖို့လဲ မတောင်းဆိုသင့်ပါဘူး။ ထို့အတူပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို နအဖဘလော့တွေနဲ့ နအဖမီဒီယာတွေက ကလေးဆန်ဆန် တိုက်ခိုက်နေတာ ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ (အကြည့်ခြင်းဆုံ၍ ရင်ခုန်နေကြပုံ , ရိုးရိုးလား ဆန်းဆန်းပြားပြားလားဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ ကလေးဆန်လဲဗျာ? )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိင်ကိစ္စ တကယ်ဖောက်ပြန်လားဆိုတာ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။ ကြားဖန်များလို့ ဟုတ်တယ်လို့ လက်ခံနေရတာပါ။ အကြီးအကဲတွေကပြောနေလို့ သူတို့ကို လေးစားတဲ့စိတ်ကို အခြေခံပြီး အမှန်လို့ပဲ ယူဆနေရတာပါ။ ဖောက်ပြန်သည်ပင်ဖြစ်ပါစေ. . . (လုံးဝသေခြာတာကတော့ ချဲ့ကားပြောဆိုမှု အနည်းနဲ့အများရှိပါတယ်) အဲလိုအမူအကျင့်မျိုးကို ဦးသန်းရွှေသမီးသာ လုပ်ရင် အခုလိုပဲ သုံးမရအောင် ပြောမလားဆိုတဲ့ စာနာစိတ်ကို အခြေံထားပြီး စဉ်းစားပါ။ တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်ပြောနေတာ နိုင်ငံအကျိုးအတွက် မဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမုန်းတီးမှုနဲ့ စစ်တပ်အတွက်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ကဲ.. မျိုးဆက်သစ်မြန်မာလူငယ်တွေကို မေးချင်ပါတယ်… ဖြေကြည့်ပေးပါလား
◆မုဒိမ်းကျင့်လူသတ်ဖို့ သင်ကြားတဲ့ မွတ်ဆလင် လူရမ်းကားဝါဒီတွေအပေါ် သဘောထားကြီးပြီး မြန်မာအချင်းချင်း နအဖ-ဒီမို တံဆိပ်ကြည့်ပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းပြီး စောက်တင်းပြောရန်ဖြစ်တာက နိုင်ငံရေးတဲ့လား?
◆ဒီမိုနဲ့ နအဖမီဒီယာတွေက ရန်တိုက်ပေးတိုင်း မြန်မာအချင်းချင်း ၀ါဒမတူတဲ့လူတွေကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းပြီး .... ရန်တွေဖြစ် . . . အမုန်း အဃာတကြီးနေတာက နိုင်ငံရေးတဲ့လား?
◆မြန်မာလူမျိုးဒီမိုသမားတွေ ဒုက္ခရောက်ရင် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ နအဖထောက်ခံနေသူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာရှိသင့်သလား?
◆မြန်မာလူမျိုးနအဖထောက်ခံသူတွေ ဒုက္ခရောက်ရင် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဒီမိုသမားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာရှိသင့်သလား?
◆ဦးသန်းရွှေ၊ စစ်တပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒီမိုသမားတွေစတဲ့ မိမိနဲ့ဝါဒတူ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့တူသူတွေကို ထိရင်မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထားလေးရှိရုံနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဖြစ်ပြီလား?
◆မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို-နအဖ-တတိယလူ စတဲ့ တံဆိပ်တွေမခွဲခြားပဲ သင့်မြတ်လာအောင်၊ စာနာ-နားလည်မှုတွေရှိလာအောင် ကြိုးပမ်းမှုတွေကို နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ မခေါ်ဘူးလား?
◆နယ်စပ်က မြန်မာမလေးတွေ ပြည့်တန်ဆာအတင်းလုပ်ခံရခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးရင် နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလား?
◆ငါတို့ရဲ့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ညီမငယ်လေးတွေကို မွတ်ဆလင်တွေက ဖျက်ဆီးတယ်။ ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး တမျိုးသားလုံးကို ကြောနေတဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလားတွေ လုပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်နေတာက နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူးလား?
◆ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ကူညီတာက နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူးလား?
◆ကုလားပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့အနွယ်ဝင်တွေကို ကူညီတာက နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးလား?
◆မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ဖို့ သင်ကြားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်တာက နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးလား?
◆မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို ကူညီတာက နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူးလား?
ခင်ဗျားတို့က.. ဘယ်လိုဟာကို နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ သဘောထားပြီး.. ဘယ်လိုဟာကို နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထင်မြင်ကြောင်း . . . လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာပြီး သုံးသပ်ကြပါဦး။ အချင်းချင်းလဲ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:05 AM